Wararka Maanta: Khamiis, Mar 21, 2013-Weerar Ismiidaamin ah oo lala Beegsaday Saldhig Ciidamada Dowladdu ay ku lahaayeen Gudaha Suuqa Bakaaraha
Qofka dhintay ayaa ahaa ruuxii qaraxa ismiidaaminta ahaa sameeyay iyadoo dadka dhaawacmayna ay ku jireen laba gabdhood oo middood ay shaah ku iibinaysay meel ku dhow saldhigga la weeraray.
“Weerarku wuxuu u muuqday mid qorsheynaa, waxaa fuliyay wiil dhallinyaro ah oo hilibihiisa aan meesha ku arkay, sidoo kale waxaan arkay dhaawaca saddex qof oo uu ku jiray taliyihii saldhigga,” ayuu yiri goobjooge meel aad ugu dhow halka uu qaraxu ka dhacay.
Taliyaha dhaawacmay ayaa lagu magacaabi jiray Sokor, waxaana dhaawiciisa loo qaaday isbitaallada Muqdisho halkaasoo lagu daweynayo, iyadoo haweenkii iyagana dhaawacmay markiiba goobta laga qaaday.
Ciidamada dowladda ayaa furay rasaas badan inkastoo aysan jirin khasaare kasoo gaartay dadka shacabka ah, iyadoo saraakiisha dowladdu ay dusha kasaareen mas’uuliyada weerarkan Xarakada Al-shabaab, inkastoo aysan Al-shabaab weli ka hadlin weerarkaas.
Qaraxan ismiidaaminta ah ayaa wuxuu kusoo beegmayaa xilli Isniintii lasoo dhaafay uu qarax ismiidaamin ah oo dilay in ka badan 10-qof uu ka dhacay agagaarka Tiyaatarka Muqdisho, kaasoo lagu weeraray taliyaha ciidamada nabadsugidda gobolka Banaadir, Khaliif Axmed Ereg.
Suuqa Bakaaraha ayaa ah goobta ugu weyn ee ganacsiga Koonfurta Soomaaliya, iyadoo weerarkan uu baqdin weyn geliyay ganacsatada ka shaqeysta suuqa, iyadoo suuqan ay horay uga dhaceen falal dilal ah.